सरकारको ५ महिने उपलब्धि सार्वजनिक, यस्ता रहेछन् उपलव्धी | Rajmarga
सरकारको ५ महिने उपलब्धि सार्वजनिक, यस्ता रहेछन् उपलव्धी
काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै भएको सचेत पहलका कारण अन्तर्राष्टि¬«य नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले नेपाललाई राख्दै आएको कालो सूचीबाट हटाएको छ । हवाई क्षेत्र कालोसूचीमा रहँदा नेपालको नागरिक उड्डयन मात्रै नभई पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको थियो । सो सङ्गठनको आग्रहमा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्यरुपमा गर्नुपर्ने हवाई सुरक्षासँग जोडिएका नीति, भौतिक, प्राविधिक क्षेत्रमा सुधार गरेको छ ।
Previous post: हत्या आरोपी राज्यमन्त्री अदालतमा हाजिर भए
Next post: लागू नहुँदै मुलुकी संहिता संशोधन हुने, यस्तो रहेछ संशोधन गर्नुको कारण
गर्मी र वर्षामा फैलिन सक्ने हैजाबाट कसरी जोगिने ? कसरी हुन्छ सङ्क्रमण ? कसरी गर्न सकिन्छ रोकथाम?
ओली सरकारका थिंक ट्यांकका संयोजक मिश्रले किन दिए राजिनामा